Martech Zone - Kushambadzira Tekinoroji
Chitatu, Nyamavhuvhu 16, 2006 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Nguva Yokuverenga: 5 maminitsi Ndakanga ndiine zuva rekuzorora nhasi (ndaida iro!). Ndakaverenga pane imwe blog kuti vazhinji vanhu vanotsvaga "101". Saka… senguva dzose, ndiri kuyedza dzidziso kuti ndione mhinduro. Ndakashamisika nekureruka kwazvo kuita izvi, pane zvinhu zvakawanda kwazvo munyika, mubhizinesi, uye munyika ino zvinondipengesa. Ehe, pamwe ndezvangu chete. Inzwa wakasununguka
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Mukomana tekinoroji iri kuchinja nekukurumidza! Handina chokwadi chekuti vangani venyu vanorangarira Tom Cruise muMinority Report, kwaanenge achivhura ruzivo kuburikidza nechiratidziro chaicho. Hechino chekutarisa chinoratidza chakakosha chiitiko: Makore mashoma apfuura, zvaingova zvakakosha chiitiko. Heino vhidhiyo yeiyo nyowani chaiyo yeiyo tekinoroji ine tsananguro yekuti inoshanda sei: Unogona kuwana mimwe mienzaniso mihombe pawebsite yeEon Reality.
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Ndiri fan hombe yaTom Peters. SaSeth Godin, Tom Peters ane hunyanzvi hwekutaurirana zviri pachena zvinobudirira. Ini handisi munzira yekuzvidza matarenda avo. Ndakawana tarenda iri muvatungamiriri vazhinji vandakashanda navo - ivo vanokwanisa kutora nyaya yakaoma kunzwisisa, uye kuirerutsa kuitira kuti dambudziko nemhinduro zvinyatsojeka kune vese vanobatanidzwa. Heano akakosha mazwi kubva kuna Tom Peters
Nguva Yokuverenga: <1 Mineti Kutenda kuna Alex King, uyo akanyorwa rakakura WordPress Plugin yekutarisa nhare. Ini ndakaisa iyo plugin mumasekondi mashoma uye yakashanda zvisina mushe nePDA yangu! Ini ndakaiisawo paPat Coyle's blog uye ini Sarudza Indy!
Nguva Yokuverenga: 2 maminitsi Nhasi pakudya kwemasikati ndasangana nevazhinji vandinoshanda navo kuti tikurukure Naked Conversations. Isu takave neboka rinoshamisa revanhu vanomiririra maindasitiri mazhinji: zviri pamutemo, kudyidzana neruzhinji, terevhizheni, telecommunication, internet, kushambadzira email, mitambo, varaidzo, ruzivo rwehunyanzvi, kushambadzira uye kutsikisa! Kwete zvakaipa kwekutanga kuratidza! Vazhinji vedu takaverenga zvizere Naked Kukurukurirana, vamwe vaive chikamu nzira kuburikidza nazvo, uye vashoma vanga vanyatso shandisa zvimwe zvemashoko kubva mubhuku. Vandinoshanda navo vanogona
Prev 1 ... 1,010 1,011 1,012 ... 1,026 Next →
Page 1011 pamusoro 1026